02 | August | 2017 | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကျေးဇူး မေ့လို့မရဟု ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင် ပြောကြား
August 2, 2017 drkokogyi
အငြိမ်းစားတပ်မတော် အကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် တင်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ကျေးဇူးကို မေ့လို့မရဘူးလို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဇွန်လ ၉ ရက်ညနေက နေပြည်တော် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာခန်းမမှာ ဂျပန် မိုင်နိချိ (Mainichi) သတင်းဌာနက တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှာ ပြောကြားခဲ့တာလို့ မြန်မာကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုကွန်ရက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
Maung Maung ကျနော့်စာအုပ် အကြောင်းလေး ရေးထားတာ တွေ့လို့.
ကျနော့်စာအုပ် အကြောင်းလေး ရေးထားတာ တွေ့လို့….
ရက်စက်မှုအဟောင်း ဖော်ထုတ်မှုအသစ်များနှင့် မြန်မာ
လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့်က လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ခုက ကျူးလွန်ခဲ့သော သွေးထွက်သံယို ရက်စက်မှုတစ်ခုသည် မြန်မာနိုင်ငံအား ဆက်လက်ခြောက်လှန့်နေသည်။ ထိုအမှုမှာ နိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှု အစိတ်အပိုင်းများ၊ ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ထောက်ခံအားပေးသူများနှင့် ယခင်စစ်အစိုးရ၏ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရသစ်တို့အတွက် ကျယ်ပြန့်သောအကျိုးဆက်များ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။
Myanmar Military and USDP Generals are လူလိမ်တွေ/တိုင်းပြည်ကိုဖြိုခွဲသူတွေ
စစ်တပ်ထဲကို အောက်ခြေအဆင့်က၀င်ပြီး….သူပုန်တွေကိုတိုက်နေခဲ့တဲ့ မွတ်စလင်တွေရှိတယ်….
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေထဲမှာ ၀င်ပြီး အစိုးရတပ်ကို ခံတိုက်နေတဲ့ မွတ်စလင်တွေရှိတယ်….
မွတ်စလင် မ၀င်ရ ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားရွာရှိသလို ဗမာရွာလဲရှိတယ်…..
မွတ်စလင်မို့ အရောင်းအ၀ယ် အဆက်အဆံ မလုပ်ဘူး…မလုပ်ရဘူး…ဆိုတဲ့….
တိုင်းရင်းသားရပ်ကွက်/ရွာ/နယ်မြေ တွေရှိသလို…ဗမာရပ်ကွက်/ရွာ/ နယ်မြေတွေရှိတယ်….
မွတ်စလင်မို့ လိုက်ပါစီးနင်းခွင့်မပြု ဘူးဆိုတဲ့….ကားလိုင်းတွေလဲရှိတယ်….
မွတ်စလင်လျှောက်ထားရန်မလို ဆိုတဲ့ အလုပ်ခေါ်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်….
မွတ်စလင်မို့လို့ သီးခြား ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူမှုတွေရှိတယ်…..